राम्रा १०७ विद्यालय, झापा र मोरङका कुन कुन ? - Baikalpikkhabar
राम्रा १०७ विद्यालय, झापा र मोरङका कुन कुन ?
कक्षा ११ पढ्ने तरखरमा रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय छनोट गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले अब्बल विद्यालयको सूची प्रस्तुत गरिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षामा कम्तीमा ३० विद्यार्थीलाई सहभागी गराएका र तीमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थीले २. ४१ देखि माथिल्लो जीपीए ल्याउन सफल विद्यालय यो सूचीमा परेका छन् । उत्कृष्ट ३२ मा परेका विद्यालय यहाँ दोहो‍र्‍याइएको छैन ।
शनिबार, ०४ साउन, २०७६, बिहानको १०:३५ बजे